2019 October 23 : AsiaNet-Pakistan
Karachi, Unity Foods Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 30, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended September 3…
Karachi, Bunnys Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 30, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended September 30, 201…
Karachi, Pak Leather Crafts Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 30, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended Sept…
Karachi, Ghani Glass Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 30, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended September 30…
Karachi, Treet Corporation Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 25, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended Septem…
Karachi, Bankislami Pakistan Limited informed Pakistan Stock Exchange that a meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on October 23, 2019 at Karachi to consider the Financial Statements for the quarter and nine months ended…
Karachi, First Treet Manufacturing Modaraba informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 25, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period end…
Karachi, Trust Modaraba informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 28, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended September 30, 20…
Karachi, Pakistan Reinsurance Company Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 30, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period …
Karachi, Indus Dyeing and Manufacturing Company Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 30, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for t…
Karachi, Hub Power Company Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 30, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended Septe…